छिमेकीहरू देखाउँदै: स्यान मटेओ काउन्टी आप्रवासी राहत कोषको कहानी
Tomás Quiñonez मा जुलाई 3, 2021 द्वारा लिखित।
केही हप्ता अघि, MAF टोलीले एक सुस्त सन्देश प्राप्त गर्‍यो जुन हामीले हेर्ने आशा गरेनौं। हाम्रो कार्यक्रम टोलीले भर्खरै स्यान माटेओ काउन्टीमा आप्रवासी परिवारहरूलाई १teen हजार नगद अनुदान प्रदान गरेको थियो। एक बर्षको अवधिमा, हामी १ का २2 टी १,००० को प्रतिबन्धित नगद अनुदान प्रदान गरेर सम्पूर्ण काउन्टीमा प्रत्येक दुई अनकम्मेन्ट गरिएको आप्रवासी परिवारमध्ये एक जनाको जीवनलाई स्पर्श गर्न सक्षम भयौं। संघीय राहत प्रयासले हाम्रा छिमेकीहरूलाई उनीहरूको सबैभन्दा ठूलो खाँचोको घडीमा समावेश नगरेको बेला यी डलरहरूले परिवारहरूलाई उनीहरूको टाउकोमा कौसी र खाना फ्रिजमा राखेका थिए।
स्यान माटेओ काउन्टी आप्रवासी राहत कोष पहिलो CARES ऐनमा छाडिएकाहरूलाई सहयोग प्रदान गर्न डिजाइन गरिएको थियो र कुल $100,000 को साथ शुरू भयो। यो अन्ततः बढेको १TP2T16 मिलियन लाईफलाइन जो पछिल्लो र कम्तिमा छोडियो। तैपनि यो लगभग भएको थिएन।
धेरै खाताहरू द्वारा, यो हुनु हुँदैन। पुरानो र नयाँ साझेदारहरूको विविध समूह, को समर्पण र विश्वास मार्फत मात्र कोष अस्तित्वमा थियो। धेरै असमानताको बिरूद्ध, हामी नाफा नकमाउने, परोपकारी र नागरिक क्षेत्रका नेताहरू सँगै आएका थियौं वित्तीय छायामा छोडेकाहरूको समर्थनको कपडामा जडानको थ्रेड बुन्न।
यो सरल शब्दमा भनियो, छिमेकीहरूले छिमेकीहरूलाई मद्दत गर्ने एक क्षण। यो कसरी भयो यो यहाँ छ।
२०२० को मेको अन्तमा, एमएएफ सीईओ होसे क्विनोनेजले एउटा असामान्य ईमेल प्राप्त गर्‍यो। यो एक स्थानीय संस्था द्वारा खडा भइरहेको छिटो प्रतिक्रिया कोष समर्थन गर्न अनुरोध थियो। उनले गिरावट आएको र अरु आउँदो सन्देशहरूको पहाडतिर लाग्ने विचार गरे। एमएएफ टोली, पछि, हाम्रो हातहरू भरिएको भन्दा बढी थियो। हामी देशभरका मानिसहरूलाई आप्रवासी परिवार कोष मार्फत महामारीको बाँच्न सहयोग गर्ने कुरामा केन्द्रित थियौं, स federal्घीय राहत प्रयासहरूले बारम्बार बेवास्ता गरेका परिवारहरूलाई नगद अनुदान प्रदान गर्न।
हामीलाई थाहा थियो, तुरुन्तै, कि आप्रवासी परिवारहरू अन्तिम र कमसेकम यस संकटमा छोडिनेछ। हामी चाँडै सार्‍यौं देशभरका परिवारहरूलाई सहयोग गर्न आप्रवासी परिवार कोष सिर्जना गर्न जुन COVID-१ from बाट बेरोजगारी, निष्कासन र मृत्युको उच्च दरको सामना गरिरहेका थिए। यो कामले हाम्रो टोलीलाई यसको सीमाहरूमा धकेल्यो किनकि हामीले महामारीको अनिश्चिततालाई नेभिगेट गर्यौं र हाम्रो अवस्थित कार्यहरू बनाए। त्यहाँ ऊँटको पछाडि अर्को प्वाँखको लागि ठाउँ थिएन।
अनुरोधमा जवाफ दिनको लागि केहि, होसेमा तानियो। एकको लागि, यो सन्देश लामो समयको मित्र र सहयोगी, स्ट्यासी होभर, स्यान माटेओ काउन्टीको कानूनी सहायता संस्थाको कार्यकारी निर्देशकबाट आएको हो। आप्रवासी अधिकार क्षेत्रमा अग्रणी हुनुका साथै, २०१ace मा स्टिसीको सहयोगी पार्टनर थियो जब हामीले यो सिर्जना गरेका थियौं राष्ट्रको सबैभन्दा ठूलो DACA आवेदन शुल्क सहायता कार्यक्रम. हामी सँगै गौंलेटबाट गयौं र जान्यौं कि उनले सम्मान र सम्मानका साथ आप्रवासीहरूलाई सहयोग गर्न अथक प्रयास गर्न हाम्रा मूल्यमान्यताहरू साझा गरे। हामीले एक अर्कालाई विश्वास गरेका छौं।
स्टेसीको शब्दको तौलभन्दा बाहिर, यो अनुरोध होसेको लागि घर नजिकै पुग्यो। यो व्यक्तिगत थियो। चौध वर्ष अघि एमएएफको स्थापना भएदेखि, हाम्रो टोलीका सदस्यहरू, साझेदारहरू र ग्राहकहरूले सान माटेओ काउन्टी घर बोलाएका छन्। काउन्टी एकैसाथ एक हो धनी क्षेत्रहरू देश मा र यो को एक को सबै भन्दा उच्च दर छ आय असमानता। जब महामारीको वजन यस असमान सामाजिक कपडामा लागू गरियो, नतिजा विनाशक थियो।
एकै पल्टमा, महामारीले वाष्पीकरण आप्रवासी परिवारहरूको सबैभन्दा आधारभूत वित्तीय स्तम्भ: आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्न आय।
तीन भन्दा बढी आप्रवासी परिवारहरूमा सैन माटेओ काउन्टीमा महामारीको उचाईमा कुनै आय थिएन, महामारीको भन्दा १० गुणा बढी। यो तनाव विशेष गरी साना बच्चाहरू भएका आप्रवासी परिवारहरूमा कडा थियो। सान माटेओ काउन्टीमा झन्डै तीन आप्रवासी परिवारका एक जनामा साना बच्चाहरू छन् र ती परिवारहरूमध्ये चारमध्ये तीन जनाले महामारीको बेलामा उनीहरूको कम्तिमा पनि बिल तिर्न असमर्थ भएको रिपोर्ट गरे।
जबकि हामी यो तथ्या the्कलाई त्यतिखेर थाहा नहुन सक्छौं, हामीलाई थाहा थियो, घनिष्ट रूपमा त्यहाँ हाम्रा ग्राहकहरूले वर्षौंदेखि सामना गरेका चुनौतीहरू छन्। हामी ग्राहकहरु संग कायम राख्ने सम्बन्ध अन्तिम विजय र दुःख को माध्यम बाट। मार्चमा क्यालिफोर्नियाको स्टे-एट-होम अर्डर जारी भएदेखि, ग्राहकहरू सहयोगको लागि बाहिर पुग्न दैनिक फोनहरू बज्यो। होशेले एउटा कथा सुनेकी थिए जुन उसले आफ्नो दिमागबाट हटाउन सकेन।
रोजाले भनिन्, "म आफै पनि एक कोभिड १ patient बिरामी छु।" "यसले मलाई भावनात्मक चोट पुर्‍यायो र यसको कारणले गर्दा मैले मेरो जागिर पनि गुमाएँ। म हाल बेरोजगार छु र मेरो एउटा छोरा छ जसको खोजी मैले गर्नुपर्छ। म व्याकुल छु र मेरो छोरा र मसँग खानेकुरा र भाडामा टेवा दिन केही आर्थिक आयको खाँचो छ। महामारीले मेरो जीवनलाई भावनात्मक तवरले चोट पुर्‍याएको छ र मेरो जीवनशैली परिवर्तन गरेको छ, सबै खराब अवस्थाको लागि। ”
उनले रोजालाई व्यक्तिगत रूपमा कहिले पनि भेटेका थिएनन्। ऊसँग थिएन। एमएएफ वित्तीय छायाँमा बाँकी रहेका व्यक्तिहरूलाई समयमै प्रासंगिक सेवाहरू प्रदान गर्ने लक्ष्यसहित सिर्जना गरिएको थियो। यो जानेर कि हाम्रो आफ्नै घरपछाडिका व्यक्तिहरू जीवित मेमोरीमा अत्यन्त चरम संकटको सामना गर्न बाँचिरहेका छन् भनेर कार्य गर्न पर्याप्त थियो। हामीले हाम्रो समुदायको लागि प्रदर्शन गर्नुपर्‍यो, अझ बढी गर्नका लागि, यदि यसको मतलब हाम्रो सीमाहरूको किनारा र त्यसपछाडि धकेल्नु परे पनि। यो हामी को हो
क्षणको जरुरीताको बीचमा, त्यहाँ व्यर्थ समय थिएन। होसेले स्टेसीको जवाफ रद्द गरिदिए, अझ बढि जान्नको लागि कल सेट अप गरे।
यात्रा भर्खरै शुरू भएको थियो।
त्यसको लगत्तै जोसेले जूम बैठकमा लग इन गर्‍यो। यो समूह पहिलो पटक भेला भएको थियो र त्यहाँ सम्भावित र अविलम्बताको स्पष्ट अनुभूति थियो। यो भयो कि जोसेले स्टेसीलाई बताएको द्रुत प्रतिक्रिया कोष काउन्टी भरि नै एकैसाथ अंकुरण भएको केही फन्डहरू मध्ये एक हो। द ग्रोव फाउण्डेशनका एक नेता, जोसे सान्टोसले यो कसरी परिवारहरूलाई अलमल्लमा पार्न सक्छ र सम्भावित कोषदाताहरूलाई कसरी पन्छाउन सकिन्छ भन्ने कुराको दूरदृष्टि थियो। एकल प्रयासमा एकजुट हुने आशामा उनले समूहहरुलाई भेला गरे।
जूम प्रोफाइल जोसेको स्क्रिनमा लोकप्रिय भएपछि, परिचित र नयाँ अनुहारहरूले उसलाई अभिवादन गरे। स्टेसी बाहेक, कलमा अर्को लामो समयको एमएएफ सहयोगी लोरेना मेल्गारेजो, एक्शन बे एरियामा फेथका कार्यकारी निर्देशक थिए। लोरेना र उनको समुदाय नेताहरूको नेटवर्कले हाम्रो २०१ D DACA अभियानको दौरान पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो र हामी आप्रवासी समुदायमा आफ्नो क्षमता बढाउनको उनीहरूको आधारभूत प्रतिबद्धतालाई सम्मान गर्दछौं। त्यो मात्र होईन, तर लोरेनाले वास्तवमै यसभन्दा पहिले एमएएफमा काम गरिसकेको थियो, र जोसेलाई थाहा थियो उनी हाम्रो ग्राहकहरूको लागि कडा वकालत गर्छिन्।
बैठकको सुरुमा नामहरूको एक संक्षिप्त दौरले दुई नयाँ साझेदारहरू परिचय गर्यो: जोन ए। सोब्राटो, सान माटेओ काउन्टीमा आधारित परोपकारी, र नाफा नकमाउने सामरी हाउसका सीईओ बार्ट चार्लो। जोन, हामीले सिक्यौं, एक हो प्रशस्त दाता जसले दिने प्रतिज्ञामा सामेल हुनुभएको छ र आफ्नो समुदायमा परिवारहरूको लागि देखाउने ईतिहास छ। जोनको परोपकारी कार्यमा परिवारले ठूलो भूमिका खेल्छ: खाडी क्षेत्रका परिवारहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने कारणहरू मात्र उसले समर्थन गर्दैन, तर आफ्नै परिवारले बे क्षेत्रमा फिर्ता पठाउँदछ। सोब्राटो परोपकारी। जोन सामरीयन हाउसको लामो समयका समर्थक थिए र सान्ता क्लारा काउन्टीमा सिर्जना गरिएको यस्तै कोष देखेर सान माटोमा आप्रवासीहरूका लागि द्रुत प्रतिक्रिया कोषको नेतृत्व गर्ने दृढ संकल्प गरे।
प्रत्येक पार्टनर सकेसम्म छिटो अनुदान वितरणको साथ बोर्डमा थिए। सबैको दिमागमा नबोलीइएको प्रश्न, यद्यपि: के हामी एकसाथ भेला हुन ल्याउन सक्छौं?
पहिलो कल एक गोता टाउको थियो पहिलो मात्र। जोसेले एमएएफको वित्तीय प्रविधि प्लेटफर्मको विवरण जोनसँग साझा गरे, हामी कसरी आफ्नो राष्ट्रिय स्तरमा आप्रवासी परिवारहरूलाई प्रत्यक्ष नगद सहयोग पुर्‍याउन हाम्रो पूर्वाधारको उपयोग गरिरहेका छौं भनेर वर्णन गर्दै। त्यसो गर्दा चुनौतिहरू पर्याप्त थिए, त्यसैले एमएएफको सैन म्याटो काउन्टीमा मैदानमा हिड्न सक्ने क्षमताले हाम्रो टोलीलाई रकम वितरित गर्ने प्राकृतिक नेतृत्वको रूपमा स्थापित गर्‍यो। जोसेले उनले स्टेसीलाई गरेको प्रतिबद्धताको पुष्टि गरे कि एमएएफले कुनै शुल्क बिना वितरण प्रक्रियाको प्रबन्ध गर्नेछ।
हाम्रो लक्ष्य, पहिलो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण, मानिसहरूलाई आफ्ना फ्रिजहरूमा छत ओभरहेड र खाना राख्न मद्दत गर्नु थियो।
हामीले बारम्बार सुनेका थियौं कि सान माटो काउन्टीमा हाम्रा छिमेकीहरूलाई सहयोग आवश्यक छ, मिलाग्रिटोस जस्ता व्यक्तिहरू।
"म १० बर्षको मेरो बच्चालाई खुवाउन स strugg्घर्ष गर्दैछु र परिवारको रूपमा, हामीलाई आफ्नो बिल र भाडा तिर्न गाह्रो भएको छ," मिलाग्रिटोसले भने। “COVID-19 को समयमा कामको स्थितिले गर्दा म धेरै तनावग्रस्त छु। मलाई थाहा छैन म कहिले सामान्य कामको समयमा जान्छु किनकि म घरहरू सफा गर्दछु र मानिसहरूलाई उनीहरूको घरमा कोही पनि चाहँदैन। ”
मिलाग्रिटोसको कथालाई दिमागमा राख्दै र बैठक अन्त्य भयो, त्यहाँ एउटा त्यस्तो भावना थियो जुन पहिलो अवरोध हटाइएको थियो। सामान्य अवस्थामा, एक सहयोगी गठन हुन महिनौं लाग्न सक्छ र एक कोषदाता एक प्रस्ताव को निर्णय गर्नु अघि प्रस्ताव, आवेदन र अन्तर्वार्ता को लागी धेरै राउन्ड अनुरोधहरूको आवश्यकता हुन सक्छ। तर हामी संकट मोडमा अपरेट गरीरहेका थियौं। त्यहाँ सदैव ब्यापारको लागि समय थिएन, र जोनले हाम्रो संगठनलाई सान माटो काउन्टीमा चाँडै परिवारहरूको सेवा गर्न आदर गरे र विश्वास गरे।
हामीले विश्वासको बन्धनलाई छिटो बनाउँनको लागि अवस्थित सम्बन्धहरूको लाभ उठायौं। जोसेले फोनहरू काम गर्ने साथीहरू, फन्डरहरू र सहयोगीहरूसँग कुरा गर्न थाले जुन पहिले नै अर्को सन्दर्भमा जोन र बार्टलाई थाँहा थियो। उनले दुबैसँग सीधै कुराकानी गरे, १-on-१ कल अनुसूची गर्दै उनलाई अझ राम्ररी चिन्नको लागि बिहान दुई बजे पछि र अघि ईमेल गर्दै कोष अगाडि बढाउन र परिवारको हातमा नगद प्राप्त गर्न। अरुले पनि गरे।
स्टसेको साथ जोसेको पहिलो कलको एक हप्ता भित्र, नयाँ टीम दोस्रो पटक भेला भयो। हामी सबै एकल प्रयासमा जान्छौं, स्यान माटेओ काउन्टी आप्रवासी राहत कोष। हाम्रो समुदायका मानिसहरूलाई सेवा गर्ने साझा इच्छाबाट साझेदारहरू यस निर्णयमा आएका थिए। त्यहाँ खेर जाने समय थिएन। सामूहिक रूपमा, हामीसँग गरिमा र सम्मानका साथ सेवा गर्ने क्षमता थियो। हाम्रो पार्टनर संगठनहरूले सम्भव भएसम्म धेरै परिवारहरूलाई आमन्त्रित गर्न उनीहरूको सम्बन्ध र स्थानीय समुदायमा आधार बनाउने छ। जोन हाम्रो कोशिसलाई समर्थन गर्न स्यान माटेओ काउन्टीमा परोपकारी समुदायको कोष जुटाउने र परोपकारी समुदायको नेतृत्व गर्ने थिए। MAF अनुप्रयोग, अनुमोदन र वितरण प्रक्रिया व्यवस्थापन गर्दछ। समरिटन हाउस र कोर एजेन्सी नेटवर्कले अनुदान प्राप्तकर्ताहरूको साथ अनुगमन गर्नेछ प्रारम्भिक १TP२T१००० अनुदान भन्दा बाहिर र्याप-वरपर सेवाहरू प्रदान गर्न।
जोनले हामीलाई बाहिर उडाए। उनले हाम्रो लक्ष्य $1 मिलियनबाट $10 मिलियनमा उठाए र व्यक्तिगत रूपमा $5 मिलियनको लागि एक चेक लेखे।
अनुदान एक दिन भित्रै हाम्रो खातामा थियो, धेरै एमएएफको वित्त निर्देशकलाई आघात पर्‍यो। यो हामीले प्राप्त गरेको सब भन्दा ठूलो व्यक्तिगत दान थियो। हामी आश्चर्यमा एक्लो थिएनौं।
"हामीले कहिले पनि कुनै पनि मा यस मापन मा काम गरेको छैन, विशेष गरी यो गति मा," स्टेसी सम्झना।
निरुत्साहित र ऊर्जावान, हामी सबै छिटो सार्यौं। जुलाईमा स्यान मटेओ काउन्टी आप्रवासी राहत कोषको औपचारिक रुपमा सुरू गरेको समयसम्म, जोनले जम्मा १ टीटीपी २T..9 मिलियन डेलिभर गरेका थिए व्यक्तिगत दाताहरू, कर्पोरेट फाउन्डेसनहरू र काउन्टीको सुपरवाइजरहरूको बोर्ड। जबकि तपस्याको यस स्तरले हाम्रो बंगारा खसाल्यो, हामी यो जोनसँगको पाठ्यक्रमको लागि बराबरी भएको जान्न आएका थियौं।
"यहाँ रूख हिलाउन को लागी एकजना मानिस छ जसलाई उसले छिमेकी मान्ने मान्छेहरु ख्याल राख्छन्," साझा बार्टले भने। "तपाईले यो उनको आँखामा देख्न सक्नुहुन्छ।"
रकम सुरक्षित भएपछि, हाम्रा साझेदारहरूले परिवारहरूलाई सन्देश सुनाउन सडकमा हिर्काए, चर्च मण्डलीहरूको अस्पताल, अस्पताल, सामुदायिक स्रोत केन्द्र र कानुनी सहायता प्रदायकहरू र टेलिभिजन, रेडियो र अधिक मार्फत जानकारी साझा गर्दै। MAF साप्ताहिक होस्टिंग शुरू भयो फेसबुक लाइभ ग्राहकहरूको लागि सत्रहरू र साझेदारहरूलाई FAQ सामग्री प्रदान गरियो। COVID-१-सहायता घोटालामा एकै साथ बढेको साथ, धेरै विश्वस्त आवाजहरूको एकल सन्देशमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित गर्न कोलाहल थियो।
रणनीति काम गर्‍यो। पहिलो महिना भित्रमा, हामीले १ 17,००० भन्दा बढी प्रि-एप्लिकेसनहरू प्राप्त गरेका थियौं, प्रत्येक दिन अधिक आउँदैछ।
सीमित कर्मचारी संसाधनको साथ अनुप्रयोगहरूको उच्च मात्रा ह्यान्डल गर्न यो चुनौती थियो, तर हाम्रा ग्राहकहरूको आवश्यकताहरू पहिले राख्ने हाम्रो प्रतिबद्धता कहिल्यै कमजोर भएन। हामीले आवेदनका क्रममा हाम्रा ग्राहकहरूको अनुभव केन्द्रित गर्‍यौं, प्रत्येक आवेदकलाई आवश्यकको साथ अथक, व्यक्तिगत समर्थन प्रदान गर्दै।
"यदि तपाईले पैसा राख्नुभयो र बीचमा आगो र ड्रेगनहरू छन् भने पैसाले केही फरक पार्दैन किन कि मानिसहरू यसमा पुग्न सक्दैनन्," स्यान मटेओ काउन्टीको एक्शन लिड कम्युनिटी ऑर्गनाइजर इन फेथ क्यारोलिना पारालेसले भने।
हामीले ग्राहकको अनुभवको प्रत्येक पक्षलाई उनीहरूको वास्तविकतामा सान्दर्भिक, समयबद्ध र आधारभूत बनाउन डिजाइन गरेका छौं। अनुप्रयोगलाई चार भाषाहरूमा अनुवाद गर्नका लागि हामीले अनुवादकहरू भाडामा लिएका थियौं, एक साधारण गुगल अनुवाद विजेटलाई अस्वीकार गर्दा यो सबै स्यान माटेओ काउन्टी आप्रवासी समुदायहरूमा पहुँच योग्य थियो। हामीले खाताहरू जाँच नगरी मानिसहरूलाई अनुदान दिने दुई तरिकाहरू विकास गरेका छौं जसले धेरै अवरोधहरू सामना गरिसकेका छन् - बैंक खाताको अभावले उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने राहत पाउनबाट जोगाउँदैन। र बर्ष भर, हामीले नियमित रूपले हाम्रा साझेदारहरूसँग अद्यावधिकहरू साझेदारी गर्न जाँच ग्यौं र सुनिश्चित गर्‍यौं कि हामीले परिवारलाई शब्द सुनाइरहेका छौं।
सँगै, हामीले केहि परिवारहरूको लागि "डिजिटल ग्रान्ड क्यान्यन" पार गर्न काम गरेका छौं। यो एक आवेदकलाई याद दिलाउने एउटा चीज हो कि उनीहरूले आफ्नो पेसटबको फोटो अपलोड गर्न बिर्सेका थिए। यो अर्को पूर्णरूपमा आवेदकको पहिलो ईमेल खाता सिर्जना गरेर, सुरक्षित रूपमा पासवर्ड बचत गर्न, कबाडी फोल्डरहरू फिल्टर गर्ने र कसरी अनलाइन प्रोफाइलहरू सिर्जना गर्ने भन्ने बारे बताएर हिड्नको लागि थियो। सयौं आवेदकहरूलाई समर्थनको यो स्तर आवश्यक पर्‍यो र हाम्रा साझेदारहरूसँगै हामीले देखाए। कानूनी सहायता सोसाइटी टोलीले पूर्ण-समय कर्मचारीलाई पनि काममा लगायो जसमा विशेष ध्यान केन्द्रित गर्नको लागि आवेदकहरूलाई यस तरीकाले सहायता पुर्‍याउनु हो।
हाम्रो पार्टनरहरूले ग्राहकहरुलाई सहयोग दिए, कोही पनि क्र्याकमा पर्दैन भन्ने कुराको लागि एमएएफ टोलीसँग दैनिक सञ्चारमा रहे। यो कामको माग गर्दै थियो। हामीले यो बनायौं, हाम्रो विश्वस्ततालाई छोडिदिन अस्वीकार गर्‍यो कि प्रत्येक ग्राहकले प्रक्रियाको माध्यमबाट सम्मान, देखेको र समर्थन गरेको महसुस गर्छौं, हामीले अनुदान प्रदान गर्न सक्दछौं वा सक्दैनौं भन्ने परवाह नगरी।
"सहयोग पैसा भन्दा बढी हो," साझा जोसे। "यो हाम्रो ख्याल राख्ने कुरा देखाउँदै छ, देखाउदैछौं कि हामी तिनीहरूलाई देख्छौं, कि तिनीहरू पछाडि छोड्दैनन्।"
एक वर्ष पछि, सान माटेओ काउन्टी आप्रवासी राहत कोष अन्ततः १TP,०१। अनुदानहरूको रूपमा सम्पूर्ण परिवारमा वितरण गर्न १ टीटीपी २ million१ than मिलियन भन्दा बढी स .्कलन गर्‍यो।
हाम्रो नेतृत्व कोषकर्ता, जोन, र पार्टनरहरू एमएएफ़, फेथ इन एक्शन बे एरिया, स्यान माटेओ काउन्टीको कानूनी सहायता संस्था र सामरी हाउसको बीचको सहकार्य हो काउन्टीमा Undocumented आप्रवासी परिवारको आधा को जीवन छोयो। तुलनाको लागि, क्यालिफोर्नियाको प्रारम्भिक $75 मिलियन आपत राहत सहायता कोष पूरै राज्य भर मा undocumented आप्रवासी परिवार को बारे मा 5% पुगेको।
हामी जोनको पिचिंग, वकालत गर्न, पक्षमा बोल्ने, हतियारहरू मर्मत गर्ने र विद्यमान दाताहरुलाई चुनौती दिन अझ बढी संगै कदम चाल्ने दृढता बिना प्रभावको यो स्तर प्राप्त गर्न सक्ने थिएनौं। ऊ जत्तिकै कठोर थियो जस्तो उसको प्राथमिक तर्कमा स्पष्ट आँखा थियो।
"अहिले नभए कहिले?" जोन साझा। “यी मध्ये धेरैले धेरै वर्षदेखि हामीलाई सहयोग गरेका छन्। अब उनीहरूलाई सहयोग गर्ने समय भएको छ। ”
यद्यपि यो काम हामी राम्रोसँग सम्पन्न गर्न मनाउन गाह्रो हुन्छ जब हामीसँग काम गर्ने मानिसहरुको अकथनीय, अन्यायपूर्ण दु: खबाट जन्मिएको हुन्छ, जो हाम्रो छिमेकमा बस्छन् र हामी साँझको पदयात्रामा अभिवादन गर्दछौं। यो अनुभव वर्णन गर्न शब्दहरू कतै रिसको दु: ख र नम्र कृतज्ञता बीच रहन्छन्। तैपनि त्यो छोटो हुन्छ।
स्यान माटेओ काउन्टी आप्रवासी राहत कोष बन्द हुने बित्तिकै हामीलाई थाहा छ कि काम सकिसकेको छैन। सुरु manyको अन्त्यमा प्रकाश हामी धेरैलाई पर्खाइमा छ आप्रवासी परिवारहरूको लागि यो मधुरो छ। सान माटेओ काउन्टीमा, प्रत्येक आप्रवासी परिवार मध्ये एक महामारीको समयमा उनीहरूको बचत हटेको छ, जबकि चार मध्ये एक जनाले आधारभूत जीवन खर्चको लागि पैसा toण लिनुपरेको थियो। Debtण परिवारहरूको हिमालहरूको हिसाबले चुकाउन वर्षौं लाग्नेछ।
सान Mateo परिवारहरु को लागी एक घर को सदस्य कोविड - 19 को साथ बिरामी हुन्छन्, तिनीहरु लाई पुन: प्राप्ति को लागी लामो बाटोको सामना गर्छन्। तिनीहरू बिरामी नहुने परिवारहरूको भन्दा भाडामा र उपयोगिता बिलमा पछाडि पर्ने सम्भावना बढी थियो। COVID-19 भएका परिवारहरू पनि 60% सम्भावना बढी हुन्छ खाना खान छोड्ने सम्भावना समाप्त गर्न को लागी।
आप्रवासी परिवारहरूको लागि यो आर्थिक विनाश सान माटो काउन्टीमा अद्वितीय छैन। राष्ट्रिय संग हाम्रो काम को माध्यम बाट आप्रवासी परिवार कोष, हामीलाई थाहा छ कि देशभरिका परिवारहरू आर्थिक संघर्ष गरिरहेका छन्। हाम्रो ११,००० भन्दा बढी अनुदानहरूको राष्ट्रिय सर्वेक्षणमा, १० मध्ये आठ जनाले उनीहरूले COVID-१ during को बखत कम्तिमा एउटा बिल तिर्न असमर्थ थिए भनेर रिपोर्ट गरे। पछिल्ला respondण लिनका लागि १० मध्ये तीन जनाले bण लिनु पर्छ, क्रेडिट कार्डमा ब्यालेन्स बोक्नु सहित। हामीले यी परिवारहरूलाई उनीहरूको आर्थिक सुधारमा सहयोग गर्न जारी राख्नुपर्नेछ, तिनीहरूको आवश्यकताहरू सुन्नेछौं र आप्रवासी समुदायहरूको प्रभाव अधिकतम बनाउनका लागि सँगै काम गरिरहेका हुनेछौं।
यसको लागि अधिक समर्थन, चलाखीपूर्ण रणनीतिहरू र अधिक सक्रिय सहयोगहरूको आवश्यक पर्दछ। यी कार्यहरूका बारे जानकारी दिनको लागि, हामीले हाम्रा सफलताहरू र स्यान माटेओ काउन्टी आप्रवासी राहत कोषसँगको चुनौतीहरूबाट चार अन्तरदृष्टि निकालेका छौं, जुन देशभरिका समुदायहरूको सेवामा लागू गर्न सकिन्छ।
१. ग्राहक केन्द्रित डिजाइनले सेवाहरू उत्पादन गर्दछ जसले मानिसहरूलाई आदर र मर्यादाका साथ व्यवहार गर्दछ।
"त्यहाँ कुनै पनि आवेदकहरू पुग्न सक्ने ठाउँमा थिए," स्टेसीले सम्झना गरे। "यो होसेको तर्फबाट एक यस्तो प्रतिबद्धता थियो कि एक प्रक्रिया डिजाइन गर्न जुन मानिसहरूले सबैलाई आदर गर्ने महसुस गर्दछ।"
सेवा डिजाइनमा ग्राहकहरूलाई केन्द्रित गर्नु हामीले सेवा गरेका व्यक्तिहरूको पूर्ण, जटिल मानवता माथि उठाउने हाम्रो विश्वासबाट आउँदछ। यसको मतलब यो हुन्छ कि ग्राहकले कुनै आवेदन पूर्ण गरेपछि, उनीहरूले सेवाहरू प्राप्त गर्ने तरिकामा, प्रत्येक ईमेलमा प्रयोग गरिएको भाषा सम्म पनि हामी आफ्ना ग्राहकहरूको जीवित वास्तविकताहरू केन्द्रित गर्दछौं। हामी जान्दछौं कि हामी सफल छौं जब एक ग्राहकलाई समर्थन महसुस गरेको बाहेक हेरिएको, सुन्ने र बोल्ने महसुस हुन्छ।
यस सफलताको फलो-अन प्रभाव उच्च सment्लग्नता र सन्तुष्टि दरहरूको साथ सेवाहरू हो। यद्यपि यी मापनहरू ग्राहकको जीवनसँग समयमै र प्रासंगिक रहेकोमा ध्यान केन्द्रित गर्न सधैं गौण रहनुपर्दछ।
२. समन्वयलाई सहयोगी साझेदारहरू बीचको विश्वास चाहिन्छ।
“सहयोग र समन्वय एकै जनावर होइन,” बार्टले भने। “सहयोग समन्वयको लागि राम्रो आधार हो। तर समन्वयको लागि आपसी भरोसा चाहिन्छ। ”
प्रभावकारी साझेदारी साझा दृष्टिबाट सुरु हुन्छ तर सफल हुन्छन् जब तिनीहरू सँगै आउँछन् र वितरित गर्दछन्। ट्रस्ट कुनै पनि साझेदारी सामना अपरिहार्य चुनौतीहरू नेभिगेट गर्न आवश्यक छ र हामीले सिक्यौं कि विश्वास निर्माण गर्न सकिन्छ जब सबै साझेदारहरूले एक अर्काको शक्तिको अवलोकन, मूल्य र सम्मान देख्दछन्। जब जोन पहिलो १ टीटी २ टी million मिलियनको साथ अगाडि बढ्यो, उनले विश्वास गरे कि हामी यसलाई समान र मर्यादाका साथ वितरण गर्नेछौं। हामीलाई, परिवर्तन, जोनले हाम्रो प्रक्रिया, टोली र टेक्नोलोजीको आदर गर्नेछन् भनेर विश्वास गर्थ्यौं।
प्रत्येक पार्टनरले विश्वास गरे कि अरुले आफ्नो तौल लिनेछन्, आफ्नो समुदायको सेवा गर्ने हाम्रो साझा लक्ष्य हासिल गर्न आफ्नो विशेषज्ञता को आधार मा। ठीक त्यस्तै भयो।
Community. समुदाय हाम्रा छिमेकीहरूमा मानवता देखेर सुरु हुन्छ।
जोनले भने, “हुर्किसकेपछि मैले जेसुइट हाई स्कूलमा पढें जुन चेतना, योग्यता र अनुकम्पामा मूल्यमान्यता भए। “ती मूल्यमान्यताहरू मसँग सधैं अडिग थिए। हामीले हाम्रो समुदायका छिमेकीहरूलाई अनुकम्पा र आदरपूर्वक व्यवहार गर्नु आवश्यक छ। "
भाषाको मामिला। यो कुनै संयोग होइन कि आजको राजनीतिक वार्ता छायाँमा छोडेकाहरूलाई अमानवीय गर्ने तरिकाले भरिएको छ। 'एलियन', '' अवैध ',' 'विदेशीहरू', वा 'चौकीदार' र 'ब्यारिस्टा' जस्ता भाषाले सबै दूरी तय गर्दछ। तर पनि प्रत्येक व्यक्तिको नाम, कहानी र एक ठाउँ हुन्छन् जुन उनीहरूसँग सम्बन्धित छ। जब हामी भाषा छनौट गर्दछौं जुन विभाजनको सट्टा जडानको उत्सव मनाउँदछ, एक फलदायी समुदाय सम्भव छ।
एमएएफ सधैं प्रवचनमा यस बदलावको लागि दृढ अडिग रहेको छ र जोनले यस समुदाय, अनुकम्पा र समानुभूतिको भावनालाई अन्य लगानीकर्ताहरूसँगको बैठकमा निरन्तर अगुवाई गरे। यो एक पारी हो जुन हामीले धक्का जारी राख्नु पर्छ।
Business. व्यापार जत्तिकै स crisis्कटमा काम गर्दैन। हामी अझै बाहिर छैनौं।
"वास्तविकता के हो भने आप्रवासी परिवारहरूले वित्तीय सुधारको लागि लामो र कठिन यात्राको सामना गर्नुपर्दछ," जोसेले परावर्तन गरे। "हामीलाई परिवारहरूको आवश्यकताहरू पूरा गर्न स्यान माटेओ काउन्टीमा जे भयो त्यस्तै थप सहयोग र सार्वजनिक-निजी साझेदारीको आवश्यकता छ।"
कुनै पनि संगठन आकारमा बढ्दै जाँदा, यसको आफ्नै लागि यथास्थिति कायम राख्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न सधैं प्रलोभनहरू हुन्छन्। जहाँसम्म, समुदायमा आधारित संगठनहरू जुन सेवाहरू प्रदान गर्न अवस्थित छन् उनीहरूले उनीहरूले सेवा गर्ने व्यक्तिको वास्तविकतालाई कहिल्यै बिर्सनुहुन्न। यदि एक विरासत प्रक्रिया संकटको प्रतिक्रियाको रूपमा प्राप्त गर्दै छ, नयाँ दृष्टिकोण आवश्यक छ। चीजहरूलाई बिभिन्न रूपमा गर्ने, चाँडो र निर्भयताका साथ अगाडि बढ्नको लागि यो इच्छुकता, सान माटेओ काउन्टी आप्रवासी राहत कोषको गठन र वितरणको लागि आवश्यक थियो।
र स over्कट समाप्त भएको छैन। हामीले आफुलाई यो क्षणको जवाफ दिनको लागि जोड दिन जारी राख्नु पर्दछ, देखाउनको लागि, अझ बढी गर्न र यसलाई अझ राम्रो गर्न।